ကလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင် ရှောင်ရမယ့် အစားအစာ (၇) မျိုး - For her Myanmar
ကလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင် ရှောင်ရမယ့် အစားအစာ (၇) မျိုး
Health, Knowledge, Motherhood
အမလေး … ရှောင်ရမှာတွေက ကိုယ့်အကြိုက်တွေချည်းပဲတဲ့လား
အစားအသောက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်စားရတာလည်း မလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲ။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်ကပုံမှန်အတိုင်းပဲ စားနေပေမဲ့လို့က မှားရင်မှားနေပြန်တာလေ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားတဲ့ အချိန်တွေမှာပေါ့။ ဟိုဟာရှောင်ရ ဒီဟာရှောင်ရနဲ့ မကြိုက်တာတွေလည်း အာဟာရဖြစ်တယ်ဆို စားရပြန်ကော။ ဒါပေမဲ့ ယောင်းမသိသေးတာတစ်ခုက ကလေးလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ အချိန်မှာကတည်းက ရှောင်ရတဲ့ အစားအစာတွေရှိတယ်ဆိုတာပဲ။ အဆန်းကြီးနော်။ ကဲ … ဒါဆို ကလေးလိုချင်ရင် ဘာတွေကို မစားသင့်ဘူးလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင် …
ဒီမှာ အများစုက ငါးသေတ္တာငါးလို့ခေါ်ကြတဲ့ တူနာငါးကို ကလေးရဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေ အလွန်အကျွံ မစားသင့်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ယောင်းတို့ရေ။ အများဆုံး စားသင့်တဲ့ ပမာဏက တစ်ပတ်မှာ ၆ အောင်စပါတဲ့.. ပုံမှန်အားဖြင့် တူနာငါးက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ငါးဖြစ်ပေမဲ့ သူ့မှာ ပြဒါးဓာတ်တွေ အမြောက်အမြားပါဝင်တာကြောင့် နောင်တစ်ချိန်သန္ဓေတည်လာမယ့် သားလောင်းရဲ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်နိုင်လို့ပါတဲ့..
Related article >>> မှတ်ဉာဏ်နဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို အထောက်အကူပြုတဲ့ အစားအစာ (၇) မျိုး
လေ့လာချက်တွေအရ သွေးထဲမှာ သကြားဓာတ်များနေတာကလည်း မျိုးမအောင်ခြင်းနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေတာမို့ ဆိုဒါပါတဲ့ အချိုရည်တွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ရယ်ဒီမိတ်လာတဲ့ အချိုရည်တွေမှာ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေး ပါဝင်တာမို့ သကြားဓာတ်မပါရင်ပြီးရောဆိုပြီး diet အချိုရည်မျိုးတွေသောက်တာမျိုးတောင် အားမပေးပါဘူးနော်။
အသင့်စား အာလူးကြော်တွေ၊ အပြင်စာ ဆီကြော်မုန့်တွေက သွေးပြန်ကြောမတွေကို ပျက်စီးစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မျိုးပွားတဲ့စနစ်ဆီကို အာဟာရဓာတ်တွေမရောက်အောင် တားဆီးပေးတာမို့ ကလေးလိုချင်တဲ့ စုံတွဲတိုင်း ဆီကြော်အစားအစာတွေကို ဝေးဝေးရှောင်သင့်ပါတယ်။
(၄) အဆီမပါတဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ
ကိုယ်ဝန်ရချင်တယ်ဆိုရင် ဝိတ်ကျချင်ဇောနဲ့ အဆီမပါတဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို ရွေးစားတာရပ်လိုက်ပါတော့။ တစ်ခုလိုချင်ရင် တစ်ခုစွန့်လွှတ်ရမှာပေါ့နော်။ နွားနို့၊ ဒိန်ချဉ်နဲ့ အခြားနို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာပါတဲ့ အဆီဓာတ်တွေကို ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ androgens လို့ ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းဓာတ်တွေပဲ ကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီဟော်မုန်းဓာတ်တွေက ယောင်းရဲ့ရာသီစက်ဝန်းကို ကမောက်ကမဖြစ်စေတာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေနည်းပါးသွားတာမျိုးက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထပါပဲ။
Related article >>> အရွယ်တင်နုပျိုစေတဲ့ ကော်လဂျင်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးမယ့် အစားအစာ (၅) မျိုး
အရက်တင်မကပါဘူး …အယ်လ်ကိုဟောလ်ပါတဲ့ ဝိုင်ဖြူ၊ ဝိုင်နီ၊ ရှန်ပိန်တွေက ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေများအောင် ကူညီပေးတဲ့ ဗီတာမင်ဘီဓာတ်တွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။ တကယ်လို့ ပွဲအခမ်းအနားရှိလို့ မသောက်မဖြစ်သောက်ရမယ်ဆိုင်တောင် ခါတိုင်းထက်လျှော့သောက်ပါ။ ရှောင်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
(၆) Processed food
ကြက်အူချောင်း၊ ဝက်အူချောင်း၊ ဘေကွန်၊ ဝက်ပေါင်ခြောက်၊ ငါးခြောက်၊ စည်သွပ်ဘူးစတဲ့အစားအစာတွေက processed food တွေပါ။ ဒီလိုအစားအစာတွေဟာ Listeria contamination လို့ခေါ်တဲ့ အစားအစာက တစ်ဆင့် ပြန့်ပွားတဲ့ ဘက်တီးရီးယားရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။
သားစိမ်းငါးစိမ်း ဘယ်သူကစားလို့လဲလို့ မတွေးစေချင်ပါဘူးနော်။ တစ်ခါတလေ သတိမမူမိပဲ စားမိနေတာတွေရှိပါတယ်။ ဆူရှီကြိုက်ကြတယ် ဟုတ်? 😛 Sashimi တွေ၊ salmon eggs တွေ၊ steak medium rare တွေ၊ ပုစွန်အစိမ်းသုပ်၊ marinated crab (ကဏန်းသားအစိမ်းကို ပဲငံပြာရည်နဲ့ နှပ်ထားတဲ့ စားစရာတစ်မျိုး) ၊ ကြက်ဥမကျက်တကျက်ပြုတ်တွေ အကုန်ပါပါတယ်နော်။ ဒါတွေမှာ သန္ဓေသားလောင်းကို ကူးစက်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ ပါဝင်တာကြောင့် အစားမက်တဲ့ မေမေလောင်းတွေအနေနဲ့ ရှောင်ရပါတော့မယ်။
Related article >>> တွဲဖက်စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုပြီး ကောင်းမွန်စေမယ့် စားစရာ အတွဲ (၄) မျိုး
မေမေတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ရင် ရှောင်ရမှာတွေ မနည်းမနောပါပဲနော်? စားချင်တာမစားရ၊ နေချင်သလိုမနေရနဲ့ စိတ်ညစ်ရတာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း ကိုယ့်ရဲ့သားသားမီးမီးလေး မျက်နှာမြင်လိုက်ရရင် ဒါတွေအကုန်ရှောင်ရကျိုးနပ်ပါတယ်လေနော်။
အမလေး … ရှောငျရမှာတှကေ ကိုယျ့အကွိုကျတှခေညျြးပဲတဲ့လား
အစားအသောကျကို မှနျမှနျကနျကနျစားရတာလညျး မလှယျတဲ့ကိစ်စပဲ။ တဈခါတလေ ကိုယျကပုံမှနျအတိုငျးပဲ စားနပေမေဲ့လို့က မှားရငျမှားနပွေနျတာလေ။ အထူးသဖွငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျထားတဲ့ အခြိနျတှမှောပေါ့။ ဟိုဟာရှောငျရ ဒီဟာရှောငျရနဲ့ မကွိုကျတာတှလေညျး အာဟာရဖွဈတယျဆို စားရပွနျကော။ ဒါပမေဲ့ ယောငျးမသိသေးတာတဈခုက ကလေးလိုခငျြတယျဆိုတဲ့ အခြိနျမှာကတညျးက ရှောငျရတဲ့ အစားအစာတှရှေိတယျဆိုတာပဲ။ အဆနျးကွီးနျော။ ကဲ … ဒါဆို ကလေးလိုခငျြရငျ ဘာတှကေို မစားသငျ့ဘူးလဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျကွရအောငျ …
ဒီမှာ အမြားစုက ငါးသတ်ေတာငါးလို့ချေါကွတဲ့ တူနာငါးကို ကလေးရဖို့ ကွိုးစားနသေူတှေ အလှနျအကြှံ မစားသငျ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယျ ယောငျးတို့ရေ။ အမြားဆုံး စားသငျ့တဲ့ ပမာဏက တဈပတျမှာ ၆ အောငျစပါတဲ့.. ပုံမှနျအားဖွငျ့ တူနာငါးက ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ ငါးဖွဈပမေဲ့ သူ့မှာ ပွဒါးဓာတျတှေ အမွောကျအမွားပါဝငျတာကွောငျ့ နောငျတဈခြိနျသန်ဓတေညျလာမယျ့ သားလောငျးရဲ့ဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးမှုကို ဆိုးရှားစှာထိခိုကျနိုငျလို့ပါတဲ့..
Related article >>> မှတျဉာဏျနဲ့ အာရုံစူးစိုကျမှုကို အထောကျအကူပွုတဲ့ အစားအစာ (၇) မြိုး
လလေ့ာခကျြတှအေရ သှေးထဲမှာ သကွားဓာတျမြားနတောကလညျး မြိုးမအောငျခွငျးနဲ့ တိုကျရိုကျဆကျနှယျနတောမို့ ဆိုဒါပါတဲ့ အခြိုရညျတှကေို ရှောငျသငျ့ပါတယျ။ ရယျဒီမိတျလာတဲ့ အခြိုရညျတှမှော ဓာတုဗဒေပစ်စညျးတှေး ပါဝငျတာမို့ သကွားဓာတျမပါရငျပွီးရောဆိုပွီး diet အခြိုရညျမြိုးတှသေောကျတာမြိုးတောငျ အားမပေးပါဘူးနျော။
အသငျ့စား အာလူးကွျောတှေ၊ အပွငျစာ ဆီကွျောမုနျ့တှကေ သှေးပွနျကွောမတှကေို ပကျြစီးစပွေီး ခန်ဓာကိုယျရဲ့မြိုးပှားတဲ့စနဈဆီကို အာဟာရဓာတျတှမေရောကျအောငျ တားဆီးပေးတာမို့ ကလေးလိုခငျြတဲ့ စုံတှဲတိုငျး ဆီကွျောအစားအစာတှကေို ဝေးဝေးရှောငျသငျ့ပါတယျ။
(၄) အဆီမပါတဲ့ နို့ထှကျပစ်စညျးတှေ
ကိုယျဝနျရခငျြတယျဆိုရငျ ဝိတျကခြငျြဇောနဲ့ အဆီမပါတဲ့ နို့ထှကျပစ်စညျးတှကေို ရှေးစားတာရပျလိုကျပါတော့။ တဈခုလိုခငျြရငျ တဈခုစှနျ့လှတျရမှာပေါ့နျော။ နှားနို့၊ ဒိနျခဉျြနဲ့ အခွားနို့ထှကျပစ်စညျးတှမှောပါတဲ့ အဆီဓာတျတှကေို ထုတျလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ androgens လို့ ချေါတဲ့ ဟျောမုနျးဓာတျတှပေဲ ကနျြခဲ့ပါတော့တယျ။ အဲ့ဒီဟျောမုနျးဓာတျတှကေ ယောငျးရဲ့ရာသီစကျဝနျးကို ကမောကျကမဖွဈစတောကွောငျ့ ကိုယျဝနျရနိုငျခွနေညျးပါးသှားတာမြိုးက ဖွဈလဖွေ့ဈထပါပဲ။
Related article >>> အရှယျတငျနုပြိုစတေဲ့ ကျောလဂငျြဓာတျကို မွှငျ့တငျပေးမယျ့ အစားအစာ (၅) မြိုး
အရကျတငျမကပါဘူး …အယျလျကိုဟောလျပါတဲ့ ဝိုငျဖွူ၊ ဝိုငျနီ၊ ရှနျပိနျတှကေ ခန်ဓာကိုယျတှငျးက ကိုယျဝနျရနိုငျခွမြေားအောငျ ကူညီပေးတဲ့ ဗီတာမငျဘီဓာတျတှကေို လြော့ကစြပေါတယျ။ တကယျလို့ ပှဲအခမျးအနားရှိလို့ မသောကျမဖွဈသောကျရမယျဆိုငျတောငျ ခါတိုငျးထကျလြှော့သောကျပါ။ ရှောငျနိုငျရငျတော့ အကောငျးဆုံးပေါ့။
ကွကျအူခြောငျး၊ ဝကျအူခြောငျး၊ ဘကှေနျ၊ ဝကျပေါငျခွောကျ၊ ငါးခွောကျ၊ စညျသှပျဘူးစတဲ့အစားအစာတှကေ processed food တှပေါ။ ဒီလိုအစားအစာတှဟော Listeria contamination လို့ချေါတဲ့ အစားအစာက တဈဆငျ့ ပွနျ့ပှားတဲ့ ဘကျတီးရီးယားရောဂါကို ဖွဈပှားစပေါတယျ။
သားစိမျးငါးစိမျး ဘယျသူကစားလို့လဲလို့ မတှေးစခေငျြပါဘူးနျော။ တဈခါတလေ သတိမမူမိပဲ စားမိနတောတှရှေိပါတယျ။ ဆူရှီကွိုကျကွတယျ ဟုတျ? 😛 Sashimi တှေ၊ salmon eggs တှေ၊ steak medium rare တှေ၊ ပုစှနျအစိမျးသုပျ၊ marinated crab (ကဏနျးသားအစိမျးကို ပဲငံပွာရညျနဲ့ နှပျထားတဲ့ စားစရာတဈမြိုး) ၊ ကွကျဥမကကျြတကကျြပွုတျတှေ အကုနျပါပါတယျနျော။ ဒါတှမှော သန်ဓသေားလောငျးကို ကူးစကျစတေဲ့ ဘကျတီးရီးယားပိုးတှေ ပါဝငျတာကွောငျ့ အစားမကျတဲ့ မမေလေောငျးတှအေနနေဲ့ ရှောငျရပါတော့မယျ။
Related article >>> တှဲဖကျစားသုံးပေးမယျဆိုရငျ ကနျြးမာရေးအတှကျ ပိုပွီး ကောငျးမှနျစမေယျ့ စားစရာ အတှဲ (၄) မြိုး
မမေတေဈယောကျဖွဈခငျြရငျ ရှောငျရမှာတှေ မနညျးမနောပါပဲနျော? စားခငျြတာမစားရ၊ နခေငျြသလိုမနရေနဲ့ စိတျညဈရတာအမှနျပါပဲ။ ဒါပမေဲ့လညျး ကိုယျ့ရဲ့သားသားမီးမီးလေး မကျြနှာမွငျလိုကျရရငျ ဒါတှအေကုနျရှောငျရကြိုးနပျပါတယျလနေျော။
Tags: Food, Health, Knowledge, lifestyle, Motherhood, Pregnancy, tips
အလုပ်သစ် ဝင်လို့ ချုပ်ရတဲ့ အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ် (EC)ထဲမှာ ဘယ်အချက်တွေ မဖြစ်မနေ ပါရမလဲ?
အိမ်ထောင်ကျပြီးသွားတဲ့အခါ မိသားစုနဲ့အဆင်ပြေစေဖို့ ပြောင်းလဲနေထိုင်သင့်တဲ့ အချက်(၃)ချက်